အမျိုးသမီးများ လျှို့ဝှက် ကင်မရာရန်မှ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ – WunYan
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အ၀တ်အထည်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပလာဇာတွေရဲ့ အ၀တ်အစားလဲခန်း (အ၀တ်အထည်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဘယ်နားမှာတပ်ဆင်ထားလဲဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းပါပဲ။
2. အ၀တ်လဲခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ mobile phone ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) နဲ့ ရိုးရိုးကြေးမုံမှန်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ဟိုတယ်တွေရဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေက အ၀တ်အစားလဲခန်းတွေ၊ ဟိုတယ်အိပ်ခန်းတွေ မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ မှန်တွေဟာ တကယ့်ကြေးမုံပြင်စစ်စစ်တွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) တွေလား ဆိုတာ သင် သံသယ၀င်ဖူးပါသလား။
Two way mirror ဆိုတာကတော့ သင့်ဘက်ကကြည့်ရင် ကြေးမုံပြင်အနေနဲ့ သင့်ပုံရိပ်ကို သင်ပြန်မြင်နေရပေမယ့် အခြားတစ်ဘက်က ကြည့်ရင် သင်လုပ်သမျှကို တစ်ဘက်လူက အကုန်မြင်နေရမှာပါ။ ဟောလိဝုဒ် စုံထောက်ကားတွေမှာ တရားခံကို စစ်မေးတဲ့အခန်းထဲမှာ သုံးတဲ့မှန်မျိုးပေါ့။ အပေါ်ယံကြည့်ရုံနဲ့တော့ ကြေးမုံအစစ်လား၊ နှစ်ဘက်မြင်မှန်လားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဘက်မြင်မှန်တွေကို သိနိုင်တဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော စမ်းသပ်နည်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။
2. သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်က လက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ သင့်လက်ချောင်းလက်သည်းခွံကြားမှာ အနည်းငယ်ကွာဟနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါဟာ သာမန် ကြေးမုံပြင်ပါ။
3. သင့်ရဲ့လက်ချောင်းလက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ လက်ချောင်းလက်သည်းခွံ နှစ်ခုဟာ တိုက်ရိုက်ထိစပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ကြားထဲမှာ အကွာအဝေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့၊ ဒါဟာ နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) ပါပဲ။
ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သာမန်ကြေးမုံပြင်တွေမှာ မှန်ရဲ့ တစ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားပြီး မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာတော့ ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်လက်ချောင်းထိပ်နဲ့ မှန်ထဲကပုံရိပ်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်ကြားမှာ မှန်တစ်ချပ်စာ ကွာခြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်မြင်မှန်မှာတော့ ပြဒါးကို မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာ သုတ်လိမ်းထားတာမို့ သင့်လက်ချောင်းနဲ့ မှန်ထဲကလက်ချောင်းကြားမှာ ကွာဟမှု မရှိတော့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မှန်ရှေ့ရောက်ရင် မှန်မျက်နှာပြင်ကို လက်သည်းထိပ်လေးနဲ့ ထိကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ဒီစာလေးကို သင့်ရဲ့ “သူငယ်ချင်းတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ” တွေဆီကို Share လေး လုပ်ပေးပါ။ ဒီစာလေးကိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့် “အမျိုးကောင်းသမီးများစွာရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာ” ကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြား လြှို့ဝှကျ ကငျမရာရနျမှ ဘယျလိုကာကှယျမလဲ
အဝတျလဲခနျးထဲမှာ hidden camera (လြှို့ဝှကျ ကငျမရာ) တပျဆငျထားမထား ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ အဝတျအထညျစတိုးဆိုငျကွီးတှနေဲ့ ပလာဇာတှရေဲ့ အဝတျအစားလဲခနျး (အဝတျအထညျအသဈတှကေို စမျးသပျဝတျဆငျကွညျ့တဲ့အခနျး) တှမှော မသမာသူတှကေ hidden camera (လြှို့ဝှကျ ကငျမရာ) တှေ တပျဆငျထားနိုငျပါတယျ။ ကငျမရာတှဟော သေးငယျလှနျးတာကွောငျ့ ဘယျနားမှာတပျဆငျထားလဲဆိုတာ တျောရုံတနျရုံမသိနိုငျပါဘူး။ ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ အလှယျကူဆုံး နညျးလမျးကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမျးသပျတဲ့နညျးပါပဲ။
1. အဝတျလဲခနျးထဲကိုမဝငျမီ မိမိဖုနျးကို ဖုနျးချေါဆိုမှု လုပျလို့ရမရ စဈဆေးထားပါ။
2. အဝတျလဲခနျးထဲကိုရောကျသှားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ mobile phone ကို ဖုနျးချေါဆိုမှု ပွုလုပျကွညျ့ပါ။
3. ဖုနျးချေါလို့မရဘူးဆိုရငျ အဲဒီအဝတျလဲခနျးထဲမှာ hidden camera ရှိနဖေို့မြားသှားပါပွီ။ ဖုနျးချေါမရတဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ hidden camera ရဲ့ ဖိုငျဘာကဘေယျက mobile phone လိုငျးကို အနှောကျအယှကျဖွဈစလေို့ပါပဲ။
နှဈဘကျမွငျမှနျ (two way mirror) နဲ့ ရိုးရိုးကွေးမုံမှနျကို ဘယျလိုခှဲခွားမလဲ ဟိုတယျတှရေဲ့ သနျ့စငျခနျးတှေ၊ စတိုးဆိုငျကွီးတှကေ အဝတျအစားလဲခနျးတှေ၊ ဟိုတယျအိပျခနျးတှေ မှာတပျဆငျထားတဲ့ မှနျတှဟော တကယျ့ကွေးမုံပွငျစဈစဈတှလေား၊ ဒါမှမဟုတျ နှဈဘကျမွငျမှနျ (two way mirror) တှလေား ဆိုတာ သငျ သံသယဝငျဖူးပါသလား။
Two way mirror ဆိုတာကတော့ သငျ့ဘကျကကွညျ့ရငျ ကွေးမုံပွငျအနနေဲ့ သငျ့ပုံရိပျကို သငျပွနျမွငျနရေပမေယျ့ အခွားတဈဘကျက ကွညျ့ရငျ သငျလုပျသမြှကို တဈဘကျလူက အကုနျမွငျနရေမှာပါ။ ဟောလိဝုဒျ စုံထောကျကားတှမှော တရားခံကို စဈမေးတဲ့အခနျးထဲမှာ သုံးတဲ့မှနျမြိုးပေါ့။ အပျေါယံကွညျ့ရုံနဲ့တော့ ကွေးမုံအစဈလား၊ နှဈဘကျမွငျမှနျလားဆိုတာ သိနိုငျဖို့ အငျမတနျခဲယဉျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နှဈဘကျမွငျမှနျတှကေို သိနိုငျတဲ့ လှယျကူရိုးရှငျးသော စမျးသပျနညျးတဈခု ရှိပါတယျ။
1. သငျ့ရဲ့ လကျခြောငျးတဈခြောငျးကို မှနျရဲ့ မကျြနှာပွငျနဲ့ ထိထားလိုကျပါ။
2. သငျ့ရဲ့ လကျခြောငျးထိပျက လကျသညျးခှံနဲ့ မှနျထဲမှာပျေါနတေဲ့ သငျ့လကျခြောငျးလကျသညျးခှံကွားမှာ အနညျးငယျကှာဟနတေယျဆိုရငျ၊ ဒါဟာ သာမနျ ကွေးမုံပွငျပါ။
3. သငျ့ရဲ့လကျခြောငျးလကျသညျးခှံနဲ့ မှနျထဲမှာပျေါနတေဲ့ လကျခြောငျးလကျသညျးခှံ နှဈခုဟာ တိုကျရိုကျထိစပျနသေလိုဖွဈနတေယျ၊ ကွားထဲမှာ အကှာအဝေးမရှိဘူးဆိုရငျတော့၊ ဒါဟာ နှဈဘကျမွငျမှနျ (two way mirror) ပါပဲ။
ဒီလိုဖွဈရခွငျးရဲ့အကွောငျးအရငျးကတော့ သာမနျကွေးမုံပွငျတှမှော မှနျရဲ့ တဈဘကျမကျြနှာပွငျကို ပွဒါးသုတျလိမျးထားပွီး မှနျကွညျ့သူဘကျက မကျြနှာပွငျမှာတော့ ပွဒါးသုတျလိမျးထားခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့လကျခြောငျးထိပျနဲ့ မှနျထဲကပုံရိပျရဲ့ လကျခြောငျးထိပျကွားမှာ မှနျတဈခပျြစာ ကှာခွားနမှောဖွဈပါတယျ။ နှဈဘကျမွငျမှနျမှာတော့ ပွဒါးကို မှနျကွညျ့သူဘကျက မကျြနှာပွငျမှာ သုတျလိမျးထားတာမို့ သငျ့လကျခြောငျးနဲ့ မှနျထဲကလကျခြောငျးကွားမှာ ကှာဟမှု မရှိတော့တာပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျနရောမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ မှနျရှရေ့ောကျရငျ မှနျမကျြနှာပွငျကို လကျသညျးထိပျလေးနဲ့ ထိကွညျ့ဖို့မမပေ့ါနဲ့။
ဒီစာလေးကို သငျ့ရဲ့ “သူငယျခငျြးတှေ၊ ညီအဈကို မောငျနှမ” တှဆေီကို Share လေး လုပျပေးပါ။ ဒီစာလေးကိုမြှဝခွေငျးအားဖွငျ့ “အမြိုးကောငျးသမီးမြားစှာရဲ့ အရှကျနဲ့ သိက်ခာ” ကို ကယျတငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။